'Iibhiliyoni' Ukuphindaphinda 2 × 10: Ukungeniswa | - Ukuzonwabisa
Eyona Ukuzonwabisa 'Iibhiliyoni' Ukuphindaphinda 2 × 10: Ukungeniswa
'Iibhiliyoni' Ukuphindaphinda 2 × 10: Ukungeniswa
UDamian Lewis njengoBobby Ax Axelrod.UJeff Neumann / Ixesha lokubonisa
UBobby Axelrod uyekisiwe. Ngemali yam, isiqendu sale veki ye Iibhiliyoni (Nawe okanye Ngaphandle Kwakho) usinika umbono okholisayo ngomonakalo anokuwenza kwimo yeengxaki kunokuba xa wayetshabalalisa eyakhe iofisi ukukhangela iincukuthu ezingekhoyo kwisizini ephelileyo. UBobby uchitha isiqendu kuhambo olusisigxina, uqhuba kwaye uhambahamba kwaye uhambahamba ujikeleza ukhangela uLara. Uninzi lwezinto ezibonisa ukuchitha ixesha kwii-perambulations zabalinganiswa babo njengombandela ongalunganga; Iibhiliyoni ngobuqili wenza izixhobo kubo, enika umboniso ukuhamba kwefrimler nokwenza intshukumo yomzimba kaBobby isikweko somdyarho wakhe kunye nengqondo engazinzanga xa engekho umfazi wakhe. Kwaye ngokwenza uhambo lwakhe lokuqala kutyelelo oluninzi kuWendy Rhoades apho asebenzise khona umphandi wabucala oyingozi ukuba amqinise esitratweni nakwimoto yakhe (!!!), umboniso ubonakalisa ukuba ukulungele ukuya kude kangakanani .
Umlingisi uDamian Lewis akangomntu udlalayo nabalinganiswa abonzakele kakhulu kwaye boyike ukuba banokukhahlela nangaliphi na ixesha ngenxa yomboniso wakhe ocacileyo Ilizwe lakowenu . Apha, wenza owona msebenzi wakhe ubalaseleyo ukusukela kuloo mboniso amaxesha amnyama kakhulu, ethe chu kodwa ngokuqinisekileyo ezityhila ukuba ungumntu ohlukumezayo, olawulayo, odelelayo othwala uthotho lwee-voicemails eziya zisiba zininzi kuLara. Uqala ecaphukile, kodwa kunganyanzelekanga ukuba abe engekho ngqiqweni; angachitha ixesha elininzi kakhulu ezama ukuhlazisa uLara ukuba azisole ngesigqibo sakhe sokuzibamba kunokuba athethe ngaphandle kwaye athathe abantwana bathethathethane-kunye nexesha elincinci kakhulu axolise ngendima yakhe ekubangeleni eso sigqibo- kodwa Ubuncinci ubonakala ngathi ngumntu onokuthi ancokole naye ukuba wayezolile ngokwaneleyo. Utshintshela kwimowudi yokukhumbula ( ukungqina uTony Soprano ukuba ulungile kwaba kanye), ethelekisa iimvakalelo zakhe kuye xa babeqala ukudibana nendudumo eyabetha uMichael Corleone xa wayeqala ukubeka amehlo kwintombazana yakhe yamaphupha eSicilian eApollonia Utatomkhulu , emva koko bakhawulezisa ukuya kuhambo abaluthathe eParis apho babengenakukwazi nokunyamezela ukuphuma ebhedini ixesha elide ngokwaneleyo ukuze bame Nawe okanye ngaphandle kwakho ekudlaleni ngokuphinda.
Kodwa zombini ezi nkumbulo zimnandi zitshintshiwe ngamandla okubetha amathumbu kamva: U-Apollonia waqhushumba yibhombu yemoto, uLara walatha kuBobby ngesihlungu esifanelekileyo xa ephinda uthelekiso ekubuyeni kwakhe, ngelixa i-U2, Udlala njengoko esusa ngokufihlakeleyo ecima yonke imiyalezo enomsindo amshiyileyo ngelixa ifowuni yakhe ibicimile ngexesha losuku. Into elungileyo, nayo: Ekupheleni kwayo yonke into yayikhwaza emnxebeni malunga nendlela eyayiza kumfundisa ngayo isifundo, ukuba ingakusebenzisa njani ngokulawula kude ngokuqhwanyaza komnwe wam wokuntywila, ukuba bekungafanele ukuba iphumelele njani Ukunyusa amathuba amaninzi okuba ahlasele abanye abantu basetyhini ukuba ngaba yiyo yonke le mibulelo ayifumeneyo. Ukubukela konke oku kudlalwa, uyabona ukuba uChuck Rhoades ubona ntoni ngalo lonke ixesha ejonga lo mfo: isisongelo esinelungelo, kunye nezixhobo ezingenamda zokuzixhasa.
Okwangoku, sukuyifumana ijikekile-ayisiyiyo iyure entle kaChuck, ngaphandle kokuvela ngokuchaseneyo. Ngokuqinisekileyo, uyahlekisa kwaye angqale ngqo kwiincoko zakhe noGeorge Minchak ongenakulindeleka, i-genteel Hall efanayo ngokulinganayo edlalwa nguMary Louise Parker kwaye uqeshwe amandla emva kwetrone UMnyama uJack Foley ukuba ahlole abagqatswa bezopolitiko bakhe. Elinye lamanqaku ale ndima kukuba iMinchak inomtsalane ngokungathandabuzekiyo, ekungekho mfuneko yokuba ithi iinzipho zeParker, kodwa ngaphandle kokujonga ixesha elide kakhulu kwiinyawo zakhe ezingenanto u-Chuck yiyo yonke into ayithandayo umnumzana utata wakhe. (Qinisa umzimba omncinci. Tata! Hei, akazukuhlola Mna …) Ewe ukuyigcina kwiibhulukhwe zakhe zokufanisa yinto esezantsi kakhulu kuyo nayiphi na indoda, kodwa njengoko uChuck eyincoma inkqubo yakhe utyhila ulwazi olubuhlungu malunga nokuxhatshazwa kwisikolo sokulungiselela- kunye nebali elityhilayo lendlela aziphindezela ngayo inkokheli ngokuchaphazela ngengozi umhlathi wayo ngokujija kakubi kwebhet kumdlalo webhola.
Leyo yinxalenye yebali lokugcina iliso lakho apha, icandelo elithetha nyani ukuba ngubani uChuck, okanye ubuncinci ukuba angaba ngubani. Njengokuba utata wakhe encedisa umsebenzi wakhe wezopolitiko okhulayo (ngendlela yakhe ye-venal, ewe), u-Chuck ubeke intshabalalo yakhe, kunye nomhlobo wakhe olungileyo u-Ira. Enkosi ngendlu yasentolongweni evela ebhankini u-titan uLarry Boyd, oweva amarhe kwabo wayesebenza nabo ngaphambili, uBobby ngoku ubuyela kwi-Ice Juice IPO yakhe kwaye ulungiselela ukubaphalaza bomile ngaphandle kwempindezelo efanayo-kanye noloyiso u-Chuck amfunayo ukuthatha ukuze ambambe ekhwele emdaka. Umboniso uhlakaniphile ngokwaneleyo okwangoku ukuba ungadlali ngeli nqaku; ihleli nje ithi cwaka ekoneni, ilinde umzuzu wayo wokufaka izinto phezulu.
Ngaba ufuna ubungqina obungaphezulu? Cinga ngendlela u-Chuck achitha ngayo uninzi lwesiqendu, esenza ubudlelwane phakathi kwakhe noWendy. Esi ayisosiphumo sokukhohlisa, khumbula, kuba bobabini babonakala bekulungele ngokulinganayo ukuba kwenzeke; U-Chuck usenokuba wakhangela umpheki kwindawo yabo yokutyela engapheliyo, kodwa uWendy unxibelelana naye yena ukubanobukho obuthuthuzelayo emva kokubaleka kwakhe noBobby noHolo. Xa bethatha isigqibo sokutsiba izibini zokucebisa kwisidlo sangokuhlwa, bafana nabantwana ababini abadlala ihoki. Zombini zivulekile kwaye zithembekile kwaye ziyathandeka kwaye ziyancoma ngexesha lesidlo sangokuhlwa, kodwa ekupheleni kobusuku uChuck uyamshiya endlwini kwaye uyishiya imoto ngolonwabo; Akukho namnye kubo owayezama ukunyanzela uthando lokwenyani okanye ukuvuselela isondo. Oko kwenzeka ngakumbi nangaphantsi komzimba, kwaye kwifashoni ababekhule beyiqhelile: UWendy ubiza uChuck ngexesha lokugoduka kwakhe kwaye umyalela ngokoqobo ukuba abuye, apho avele khona kwi-domintatrix epheleleyo yeseshoni esempilweni yeBDSM. Njengamaxesha onke, umboniso awubonakalisi umdla wabo kwikink njengophawu lokungasebenzi kakuhle-yeyona nto ibasebenzelayo, nokuba nini, okanye ngakumbi xa, besiva ezona zintando zabo komnye nomnye.
Kodwa ntoni enye into Ngaba uChuck wenza ngexesha lesiqendu? Uyalela ukuqhekezwa eofisini ye-dominatrix yobungcali ngamanye amaxesha ayibonayo ngemvume kaWendy-kwaye, ngesinye isihlandlo wazisola kwangoko kwaye wacima, ngaphandle kwayo-ukuze athathe iifayile zelaptop yakhe ziye eMinchak ukuba zihlolwe, utyando olwathatha iinyanga. zokucwangcisa. Ngamanye amagama, wayephula ubungcwele bokuba i-dominatrix ichaze ngokuchanekileyo njengento esondele kakhulu kumbindi wabo njengoko wayenzile ngaphambili, kwaye ukwenza njalo ngokufunda ngokungekho mthethweni ilaptop yomnye umntu, yiyo loo nto yena noWendy behlukana ngokwahlukana kwasekuqaleni!
Ukufana kwenziwa ngokuqaqambileyo siskripthi sikaWillie Reale, kwaye umlawuli uEd Bianchi uzisa udumo-kumdlalo weTV wakudala Ucingo, Deadwood , kunye Ubukhosi beBhodiwalk Kwiziqendu ezikwimbali ngaxeshanye zothando kunye neparanoid. Ndithetha ukukhala ngokuvakalayo, le yindawo apho uToby Leonard Moore's uBryan Connerty kunye noAsia Kate Dillon's Taylor Mason -imidlalo emibini yomdlalo ophantsi kunye nabalinganiswa abanovelwano-banokubamba kwaye baziva ngathi sisitya esecaleni kunokuba eyona iphambili kunjalo. Njengabo bobabini u-Chuck ixhoba elibi kunye no-Chuck ongaphantsi angathi, enkosi mnumzana, ndingayifumana enye?
Eyona nto ibalaseleyo kwaye imbi kakhulu 'yoMdlalo weZihlalo zobukhosi' 7 × 04: 'The Spoils of War'
'Ibali laseHorry laseMelika: I-Freak Show' 4 × 5: UJack iRipper yayiyiWindsor
Ku 'David Crosby: Khumbula igama lam,' i-Music Icon icinga ngeebhulorho azitshisileyo
ezona ndawo zingcono zokuthandana kwi-Intanethi kubudlelwane obunzulu
spider man ukubuyela ekhaya ukusasaza inkonzo
yeyiphi imibuzo oza kuyibuza isangoma
kukhuselekile ukusebenzisa i-wifi yoluntu
wasweleka u-buryn reynolds?
Ixesha lebhulorho fx 3